I-Sonos iphucula izixhobo ze-Sonos One kwesi sizukulwana sesibini | Iindaba zeGajethi
I-Sonos iyaqhubeka nokubheja ekuphuculeni iimveliso zayo, kwanokubambisana okubalulekileyo njenge-IKEA. Kule meko, sifumene iindaba ezimnandi ukuba uceba ukufumana iSonos One kule mihla imbalwa izayo. U-Sonos uthathe isigqibo sokuhlaziya izixhobo zangaphakathi ze-Sonos One kwaye ke unikezela isizukulwana sesibini nge-Bluetooth Low Energy kunye nezinye izinto ezintsha. Le yindlela inkampani enqwenela ukutsala abasebenzisi abatsha ngelixa igcina ukuthembeka kwabo sele bekhona, abaya kuqhubeka nokufumana uhlaziyo rhoqo lokubandakanya zonke iindaba kwinqanaba lesoftware eliya kuphehlelelwa yinkampani kwiinyanga ezizayo.
Kubalulekile ukuyigxininisa loo nto Awuyi kuba nakho ukuxelela ukuba uSonos sisizukulwana sokuqala okanye sesibini ngokusijonga nje ngaphandle, Uyilo lwangaphandle lusefana ncam, ke kuya kufuneka uye kwimithombo esemthethweni yokuthenga njengewebhusayithi yeSonos okanye amaziko akhethekileyo, musa ukukunika ubuqhetseba. Kuya kufuneka sigxininise ukuba inkumbulo engaphezulu kunye neprosesa ehlaziyiweyo idityanisiwe ukuze isixhobo sikwazi ukuhamba ngaphandle koloyiko kumathumbu e-Alexa kunye neKhayaKit, iinkonzo ze-IoT zeAmazon kunye neApple ngokwahlukeneyo kwaye izixhobo zikaSonos ziqheleke kakhulu.
Enye into entsha yinkxaso yeBluetooth Energy Energy, Oku kuyakuvumela ukuba unxibelelane ngamaxesha amafutshane kwisixhobo seSonos sokumiswa kwayo kunye nenye into encinci, kuba sikhumbula ukuba ekuphela kwendlela yokunxibelelana nezixhobo zeSonos ngokuchanekileyo ngoqhagamshelo lweWiFi, into ebenza babaluleke kakhulu. Oku kuya kuba nefuthe kwixabiso eliseSpain lomzekelo wesizukulwana sesibini esiya kuba ngama-229 euros, nangona ithiyori imodeli yesizukulwana sokuqala iya kuqhubeka ithengiswa ngesaphulelo esincinci, siya kukugcina ulumke ngokupheleleyo kuzo naziphi na iindaba.
Thenga iNonos enye kwi-229 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Sonos iphucula izixhobo ze-Sonos One kwesi sizukulwana sesibini